Ijikwa CTA ma ọ bụ Mgbasa ozi esighi na WordPress | Martech Zone
Anyị na-agbakọ ngwakọta nke mgbasa ozi na saịtị anyị - gụnyere oku na-arụ ọrụ ọkọlọtọ na-akwalite ọrụ anyị, Mgbakwunye mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ anyị tụkwasịrị obi, na mgbasa ozi nkwado na ụlọ ọrụ ndị anyị họọrọ isoro. Ngwakọta ngwakọta dị iche iche dị mgbagwoju anya, yabụ anyị jikọtara ad mgbasa na isiokwu anyị iji jikwaa mgbasa ozi ngosi.
Jikọtara na Nhọrọ visetị Jetpack na wijetị, ịtụkwasị mkpa na ike ịkpọ oku iji rụọ ọrụ ma ọ bụ mgbasa ozi dị mfe iji mezuo WordPress taa. Ebe nrụọrụ WordPress gị nwere ike ọ gaghị enye mgbasa ozi mpụga ma ọ bụ chọọ nhọrọ ndị anyị na-eme. N'ezie, ị nwere ike chọọ ijikwa CTA nke gị. AdPress bụ ngwa mgbakwunye WordPress wuru maka nke a.
AdPress bụ a adịchaghị nkwụnye jikwaa Mgbasa ozi esighi na. Ọ bụ ihe dị ike na nke zuru oke gosipụtara ikpo okwu iji ree ma gosipụta mgbasa ozi maka WordPress blog:
Mfe Mbido - Mepụta mkpọsa gị na clicks ole na ole na AdPress Ad Designer. Ezipụta otú ị Ad ga-egosipụta, Kpọọ Iji Action Ad, na ire nkwekọrịta… Integrating gị Ad Mpaghara na gị blog bụ nnọọ mfe. AdPress nwere wijetị, shortcode na nkwado ọrụ.
Na-ere ahịa akpaaka - Ndị ọrụ debanyere ma zụta ọkwa Sp site na dashboard profaịlụ ha. Kwụ ụgwọ na-akpaghị aka edozi na PayPal. Mgbe onye ọrụ mere ịzụrụ, a na-agwa gị na dashboard gị, ịnwere ike ịnabata ma ọ bụ jụ Ad ha. A na-akwado nkwụghachi PayPal.
Nchịkọta Mgbasa Ozi - Ad Stats nwere ike ịnweta ma Admin na onye ahịa zụrụ Ad. AdPress na-enye nkọwa zuru ezu na CTR, Ọkara na eserese mara mma.
Akụkọ, Mbubata / Mbupụ, Nhazi - AdPress dere akụkọ ihe mere eme banyere nzụta mgbasa ozi ọ bụla. O nwekwara atụmatụ mbubata na mbupụ dị ike nke na-akwado ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke data gị na faịlụ ndabere. AdPress nwere ike ịhazi mgbasa ozi Mgbasa ozi. A na-agbanwe HTML na CSS koodu maka Mgbasa ozi esighi na sistemụ ntọala.
Enyemaka na Nkwado - AdPress na-abịa na faịlụ enyemaka zuru ezu. Ha na-enyekwa nkwado ọsọ ọsọ (nzukọ + ozi ịntanetị). Na-atụ anya nzaghachi n'ime otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ.
Jiri njikọ njikọ anyị ma ị nwere ike budata AdPress maka saịtị gị naanị $ 35. Ihe mgbakwunye ahụ nwere ogo dị elu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku ịzụrụ taa.
Tags: njikwa failiadpressnjikwa mkpọsanjikwa njikwa WordPressnjikwa mkpọsa WordPresswordpress plugin